रेसुङ्गा नगरपालिकाको कर अशुली डर लाग्दो, जनताबाट कर अशुल्दै कर्मचारीले कुम्लाउँदै … ! | ebaglung.com
रेसुङ्गा नगरपालिकाको कर अशुली डर लाग्दो, जनताबाट कर अशुल्दै कर्मचारीले कुम्लाउँदै … !
२०७५ कार्तिक १३, मंगलवार १७:०९	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ कात्तिक १३ । तपाई सचेत नागरिक हो र स्थानिय तहमा कर तिर्दै हुनुहुन्छ भने आफुले रशिद मात्रै नलुनिहोस । त्यस रशिदको अर्धकट्टीमा कर्मचारीले कति रकम लेखेका छन भन्ने कुरा पहिला हेरेर मात्र पैसा तिर्नुहोस् । गुल्मीको एक स्थानिय तहमा कर्मचारीबाट कर अशुलीमा हुँदै आएको ब्रम्हालुटले देशैभरका स्थानिय तह र नागरिकलाई यहि कुरामा सचेत गराएको छ ।
के गरे त्यहाँका एक कर्मचारीले ? नागरिकबाट १० हजार कर रकम लिए । सोही अनुरुपको रशिद पनि दिए । तर पछि अर्धकट्टीमा जम्मा १ हजार लेखेर ९ हजार आफैले झ्वाम पारे । यस्तो कुनै एक जना मात्र करदाताबाट गरिएको होईन ।
त्यस नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालका छोरा बिरेन्द्र भुसालको बिरेन्द्र कन्ट्रक्सन निर्माण सेवा प्रालिको कर बुझाउँदा १० हजार रुपैया पन्थीले लिएर सोही बराबरको रशिद पनि पन्थीले दिए ।
उनका त्यस्ता तमाम ठगी धन्दालाई चियो गर्दै आएका गौतमले एक दिन रंङ्गेहात नै पन्थीलाई समात्न सफल भए । लगत्तै शाखा अधिकृत सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यी छानविन समिति गठन गरियो । पन्थीले अन्य धेरै जना करदाताबाट त्यसरी नै ठगी गर्दै आएको पत्तो लगायो ।
आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ भित्रमा पन्थीले राज्यलाई २ लाख ९४ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ ठगी गरी आफुले कुम्लाएको तथ्य फेला पा¥यो । उक्त प्रतिबेदन मेयर डिल्लीराज भुसाल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तीराम मरासीनी समक्ष पेश गरियो । मेयर भुसाल भन्छन–‘ त्यस पछि निजलाई कार्बाही स्वरुप जागिरबाट बर्खास्त गरिएको हो ।
गुल्मीको गाउँ गाउँमा एम्वुलेन्स ल्याईँदै थन्काईँदै
नेकपा गुल्मीको वडा स्तर सम्म नेतृत्व तोक्ने काम सकियो